Wararka Maanta: Talaado, July 10, 2012-Ra'iisul Wasaaraha Somalia iyo Danjire Augustine Mahiga oo Maanta kulan la yeeshay Odayaasha Dhaqanka ee Muqdisho ku shirsan
Kulanka oo ahaa mid loo diiday inay saxaafadu goob-joog ka ahaato ayaa waxaa ka qaybgalay xubno ka socda Qaramada Midoobay iyo wasiirada DKMG ah qaarkood, iyadoo ra'iisul wasaaraha iyo Mahiga ay hadalo u jeediyeen odayaasha dhaqanka.
"Odayaasha dhaqanka waxay udub dhexaad u yihiin horumarka uu dalku higsanayo; kagana gudbayo xilligii KMG ah, waxaana diyaar u nahay inaan odayaasha ka caawinayo wax walba oo fududeyn kara howshooda," ayuu yiri ra'iisul wasaaraha Soomaaliya oo saxaafada uga warbixinayay khudbadii uu odayaasha u jeediyay.
Inkastoo aan si dhab loo ogeyn waxyaabaha rasmiga ah ee ra'iisul wasaaraha iyo ergayga Qaramada Midoobay ay kala hadleen odayaasha ayaa hadana hadalkii ay siiyeen saxaafada waxay ku sheegeen in odayaasha ay ku amaanan yihiin howsha ay hayaan.
Ra'iisul wasaaraha Soomaaliya ayaa sheegay inuu odayaasha ka dalbaday inay xiliga loogu talogalay kusoo gudbiyaan magacyada ergada ansixinaysa dastuurka cusub ee Soomaaliya, si howshaas looga gudbo.
"Qaramada Midoobay waxay tixgelin doonaa rabitaankooda odayaasha dhaqanka," ayuu danjire Mahiga ku sheegay khudbadii uu u jeediyay odayaasha dhaqanka ee ay maanta la kulmeen, isagoo odayaasha ku wargeliyay in sida ugu dhaqsiyaha badan ay kusoo gudbiyaan ergada ansixinaysa dastuurka soona xulaysa xubnaha baarlamaanka cusub.
Kulanka Mahiga iyo Gaas ay la yeesheen Odayaasha dhaqanka ayaa wuxuu kusoo beegmayaa iyadoo Madaxweynaha Somalia uu shalay Odayaasha dhaqanka kula kulmay Xarunta Madaxtooyada isagoo ka dalbaday inay soo dedejiyaan xulitaanka Ergada Ansixinta Dastuurka.